Shiinaha samaynta kartoon si otomaatig ah oo xawaare sare leh wax soo saar wax soo saar iyo soo saar warshad | S-conning
Xawaare sare samaynta kartoon si otomaatig ah iyo khadka wax soo saarka talooyin
Xawaaraha Sare ee Sameynta Kartoonada Gawaarida & Khadka Waxsoosaarka Galinta
Isugeyntan 'Fully Automatic Inter' waa isku-dhafka ugu fiican ee S616 ZT384 iyo Z130, oo awood u siinaya wax-soo-saarka ugu sarreeya ee ku habboon daawooyinka, cuntada, cabbitaannada, waxyaabaha la isku qurxiyo, waxyaabaha lagu nadiifiyo, warshadaha kiimikada iyo waxyaabo kale oo badan. Mashiinka samaynta saxanka quudinta ah ee sumadda sumadda leh ayaa ah xulashadaada ugu fiican wax soo saarka otomaatigga ah iyo mashiinka mashiinka calaamadeeya ee sanduuqyada.
Qiimaha mashiinka wax lagu rakibo ee dhalada ah ee loogu talagalay waxaa loogu talagalay hawlgallada fudud iyo beddelka degdegga ah ee alaabada kala duwan. Mashiinka ayaa si fudud u hagaajin kara iyadoo lagu saleynayo qeexitaanka alaabada macaamiisha iyo shuruudaha.
-Waxaa loo adeegsan karaa noocyada kala duwan ee dhalooyinka, sida dhalooyinka dareeraha ah ee afka laga qaato, dhalada ampoules, dhalooyinka shiidan iyo qalinka lagu durayo, iwm, dhexroor ka yar 25mm.
-Mashiinka oo dhammeystiran wuxuu qaataa nidaamka calaamadeynta adeegga iyo calaamadda shaabadda, oo leh hirgelinta dhammaystiran ee isku xirnaanta caqliga leh ee sameynta, kaararka kartoonka iyo feerka.
- Shaashadda weyn ee taabashada HMl waxay bixisaa soo bandhigid macluumaad aan caadi ahayn iyo hagis toogasho dhib ah, iyo sidoo kale hawlgal fudud iyo dayactir habboon. Mashiinka si fudud ayaa loo isticmaali karaa qof kasta .
• Si fudud loo rakibo loona shaqeeyo, oo u baahan dayactirka ugu yar ee waxqabadka ugu sarreeya iyo nolosha waxtarka leh.
• Xakamaynta kumbuyuutarka ee isku dhafan ee PLC iyo kontaroolada shaashadda taabashada tiknoolajiyada sare ee hawlgalka fudud. Dhammaan waxqabadyada waxaa xukuma nidaamka adeegga 'Panasonic servo system'.
• Gaashaanka nabdoon ee buuxiya shuruucda amniga ee adag.
• Nidaam gaarsiiyaha adag oo uu wado matoor tayo sare leh. Wadooyinka hagaha gudbiyaha ee la hagaajin karo si ay ula jaan qaadaan alaabooyin kala duwan.
• Kartoonka aan u qalmin waxaa lagu ogaan karaa farsamaynta qalabka Dhalashada dhalada.
• Qiimeynta miisaanka elektiroonigga ah ee la hagaajin karo si looga takhaluso burburka baakadka oo loo yareeyo xirashada dharka.
8) .Label codsadaha waxaa lagu qalabeeyaa matoor hawleed tayo sare leh
Hore: Mashiinka xirxira dhalada dareeraha ah
Xiga: Mashiinka calaamadda hoose ee liinta
Mashiinka Calaamadeynta kartoonka
Top Iyo Labeler Labeler, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi,